Amagumbi atofotofo kwindawo Epholileyo - I-Airbnb
Amagumbi atofotofo kwindawo Epholileyo
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguHelen
Indawo yethu yangaphambili yenkulungwane ye-18 enomva wehlathi labucala elijongene noMlambo iHahnenbach. Ikhaya lethu likwigadi epholileyo elungele izilwanyana zasendle kodwa kumgama wokuba ungahamba ngeenyawo (malunga nemizuzu eyi-15 ukuya kweyi-20) ukuya kuzo zonke izinto ezinokusetyenziswa.
Kubantu abakhwela amatye siseKirner Dolomiten. Ipaki yesizwe engqonge i-Hunsruck ilungele ukunyuka intaba nokuqhuba ibhayisekile kwaye sinendawo eyaneleyo yangaphandle kunye nendalo apho unokuzonwabisa khona.
Amagumbi okulala eendwendwe, igumbi lokuhlambela nendawo yokuphumla zibekwe kumgangatho ophakathi ibe kukho umnyango ongaphakathi okwenza ube nemfihlo ngesitshixo sakho.
Indawo Yokuhlala Yeendwendwe ineTV, iMicrowave, ifriji, iKettle kunye nomatshini wekofu, izixhobo ezisisiseko kunye ne-crockery, itafile yokutyela kunye nesofa enkulu. Asikho isitovu okanye isinki yasekhitshini kodwa sihlamba nayiphi na i-crockery kunye nezinto zokuhlamba izitya kumatshini wethu wokuhlamba izitya ukwenzela ukuba wonwabele usuku lwakho.
Igumbi lethu lokulala ligumbi elikhulu elilala abantu ababini ibe igumbi lesibini linebhedi elala abantu ababini ibe igumbi lesithathu linebhedi enye. Igumbi lokuhlambela elinye linesinki, indlu yangasese neshawa.
Ikofu, iti, ubisi namanzi asebhotileni afumanekayo nesidlo sakusasa esisemgangathweni esifumaneka kwindawo yakho yokuphumla.
Iibhedi, izibini kunye neentsapho zonke zamkelekile. Umgangatho weendwendwe yindawo yakho yabucala.
Iivenkile zokutyela kunye neekhefi zifumaneka ngaphakathi nakwiMarkt Plaz. Okwangoku ngenxa yeCOVID Take away KUPHELA. (01-01/21) Iipasitrakethi kunye neChemist kwimizuzu eyi-15 xa uhamba ngeenyawo. Indawo yokuqubha enamanzi ashushu yaseKirn 's Open Air (tzar ukuba ivuliwe ngenxa yeCovid 19.) ikumgama wemizuzu eyi-15 xa uhamba ngeenyawo. Kukho iindlela eziya ngqo kumbindi wedolophu ezilandela uMlambo i-Nahe, eziphawulwe ngokuthe ngqo ukusuka endlwini ukuya emaphandleni. I-Schwarze Wand yaseKirner Dolomiten inokujongwa ukusuka kwigumbi lokulala leendwendwe kwaye inokufikelelwa ngeenyawo kwimizuzu eyi-20 (phezulu egqumeni ! ) . I-Kryburg (i-Castle Ruin/Indawo yokutyela/iMyuziyam ye-Whisky) luphawu lomhlaba olwaziwayo kunye nendawo ngaphakathi kweKirn. I-Kirn ineBrewery yayo 'Kirner Bier' 'kunye neeVini zengingqi yaseNahe kulula ukufikelela kuzo. Nceda uqaphele ukuba iFelsen Kirche eseIdar Oberstein okwangoku ivaliwe de kube ngo-2021 ngenxa yemisebenzi yobuso bamatye obujikelezileyo.
Siza konwaba ngakumbi kwaye siza kukuvuyela ukunikezela ngesikhokelo kunye nenkcazelo ngendawo yasekuhlaleni ngolwazi lwethu lwasekuhlaleni, iimephu kunye neencwadana. Siyavuya nokuba iindwendwe zethu zikhetha "ukuzenzela izinto zazo '".